Maxaa ka cusub arinta Neymar Jr iyo Barcelona? (Wararkii u danbeeyay) – Gool FM
(Paris) 01 Sebt 2019. Xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa go’aamiyay mustaqbalkiisa kooxda Paris Saint-Germain, kahor saacado inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Sida laga soo xigtay shabakada caanka ah ee “Sky Sports” Xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa go’aansaday inuu iska sii joogo Paris Saint-Germain, kaddib markii lagu guuldareystay wada hadaladii la doonayay inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Barcelona.
Neymar Jr ayaa maanta oo Axad ah la qorsheenayaa inuu u safro magaalada Miami ee dalka USA, si uu ula midoobo xulkiisa qaranka Brazil.
Shabakada ayaa tilmaamtay in Neymar Jr uu ixtiraamayo inta ka hartay qandaraaskiisa kooxda Paris Saint-Germain ee seddex xilli ciyaareed soo aadan, wuuna damacsan yahay inuu hadda wixii ka dambeeya uu joogteeyo tababarka PSG, kaddib marka laga soo laabto ciyaaraha caalamiga ah, si uu qeyb kaga noqdo kulamada ay ciyaareyso PSG.
Waxaa xusid mudan in wadahadalada Paris Saint Germain iyo Barcelona, aysan gaarin ilaa iyo heer heshiis ah, maadaama ay naadiga reer France dooneysay in xiddiga reer Brazil ay ku iibiso lacago kaash ah oo kaliya, halka Barca ay dooneysay in heshiiskan ay ku soo afjarto inay qeyb kaga dhigto qaar ka mid ah xiddigaha ay ku heysato Camp Nou..